LG 82” UN80 Series UHD 4K Smart TV with AI ThinQ 82UN8000PTB (Black) ~ ICT.com.mm
HomeLG 82” UN80 Series UHD 4K Smart TV with AI ThinQ 82UN8000PTB (Black)
LG 82” UN80 Series UHD 4K Smart TV with AI ThinQ 82UN8000PTB (Black)
Screen Size: 82” Intelligent Processor: α7 Gen3 Intelligent Processor Resolution: 4K(3840 x 2160p) TruMotion/Refresh Rate: 100Hz Dolby Vision Premium HDR: HDR 10 Pro Sound Output: 20 W Operating System(OS): webOS Smart TV... [Learn more]
Brand: LGSKU: 173813N/ASee more: LG, LG Promo, Lifestyle, New Arrivals, Products, Shop, Today's Deals, TV & EntertainmentFilter by: Promotion, Televisions
Intelligent Processor: α7 Gen3 Intelligent Processor
Resolution: 4K(3840 x 2160p)
TruMotion/Refresh Rate: 100Hz
Model Number: 82UN8000PTB
LG အမှတ်တံဆိပ် UN80 Series 4K စမတ်တီဗွီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၈၂) လက်မ အရွယ်အစားရှိပြီး Resolution အားဖြင့် 3840 x 2160p resolution ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Refresh Rate – 100 Hz ရှိတဲ့အတွက် အရမ်းမြန်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ဝေဝါးခြင်းမရှိဘဲ ပြသပေးနိုင်သလို ဂိမ်းကစားချိန်မှာလည်း လုံးဝအဆင်ပြေစေမှာပါ။ 4K Cinema HDR လည်းပါဝင်သလို HDR 10 Pro လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Real 4K နည်းပညာဖြစ်တဲ့အတွက် အပြင်မှာ ပကတိ မြင်တွေ့နေရသလို သဘာဝကျတဲ့အရောင်အသွေးကို မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မှာပါ။ ပြင်ပရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ပြသတဲ့ Color Setting အတိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်စေမဲ့ FILMMAKER MODE™ လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ HDMI 2.1 ရဲ့ Feature တွေဖြစ်တဲ့ VRR, ALLM နဲ့ eARC တို့ကြောင့် လျင်မြန်စွာပြသနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပကတိအတိုင်း ဝေဝါးခြင်းမရှိဘဲမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်လို့ အပြင်မှာတကယ်ရင်ဆိုင်ကစားနေရသလို အမိုက်စား Gaming Experience ကို ရရှိစေမှာပါ။ Operating System(OS) အဖြစ် webOS Smart TV နဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး α7 Gen3 Intelligent Processor နဲ့ မောင်းနှင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းစက်နဲ့ စလောင်းစက်၊ Set-top Box တွေ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် HDMI ပေါက် လေးခု ပါဝင်ပြီး အခြားချိတ်ဆက်မှုတွေအတွက် USB ပေါက် သုံးခု ပါဝင်ပါတယ်။ Upscaler အတွက် 4K Upscaler ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ စမတ်တီဗွီဖြစ်တဲ့အတွက် ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး Netflix, Apple TV, Disney+ စတဲ့ တီဗွီစီးရီး Apps တွေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ Apple Airplay2 ကိုအသုံးပြုပြီး iOS ကနေ တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေလို အားကစားပွဲတွေ ကြည့်ရှုချိန်မှာ ပတ်လည် အသံထွက်စနစ်ဖြစ်တဲ့ 20W အသံပါဝါရှိတဲ့ Surround Sound စပီကာတွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ မိမိကြည့်ရှုလိုသမျှ ဘောလုံးပွဲနဲ့ အခြားအားကစားပွဲတွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့ စိတ်ကြိုက်ပွဲစဉ်တွေကို အသိပေးမဲ့ Sports Alert လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့တီဗွီကို အသံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် နာမည်ကျော် Digital Assistant တွေဖြစ်တဲ့ Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, Apple HomeKit, Home Dashboard တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်စေမဲ့ ThinQ AI ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Α7 Gen3 4K Smart Processor, Enhance your viewing experience
By improving pictures and sound sources This machine-learning-based processor delivers incredible sound and picture.
VRR, ALLM and eARC, A more realistic gaming experience
Higher frame rates, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) and eARC (Enhanced Audio Return Channel) are all compliant with the HDMI 2.1 standard.These latest features support fast-moving content. With higher resolutions and smooth and coordinated graphics. Provideamore realistic gaming experience.
Dolby Vision IQ, Watch movies in original style
Dolby Vision IQ intelligently adjusts screen brightness, color and contrast based on content type and lighting conditions.
Total price:K3,947,000 K3,833,200
This item: LG 82” UN80 Series UHD 4K Smart TV with AI ThinQ 82UN8000PTB... K3,890,000 K3,790,000